Kuleli zwe lanamuhla isihloko yokufunda ulimi Liyindawo efanele. Esikhathini sethu, lapho kukhona ukufinyelela kuwo ngaphandle kokuvinjwa ulwazi kanye nohambo, ulwazi eyodwa, futhi mhlawumbe izilimi eziningana zakwamanye amazwe ingafaniswa esivula iminyango eminingi. Lezi zinyathelo has a sokwazi izilimi eziningi. Yini simenzelani lokhu?
IsiZulu - hhayi umkhawulo
Polyglot ucingo Abantu abazi ezinye izilimi zakwamanye amazwe. Ngokuvamile lisho ulwazi okungenani ezinhlanu. Akukho ejwayelekile iyunifomu, kanjani ngezilimi eziningi kufanele wazi sokwazi izilimi eziningi. ngezilimi ezinhlanu ngaye Yiziphi? Manje lo hhayi kakade siyindlala - ukwazi izilimi eziningana. Ukuhlonipha polyglot ungumnikazi ngezilimi ezingaphezu kuka-10. Futhi zonke ngenxa ukuthi izinto ukuqeqeshwa seziyatholakala kunanini ngaphambili. Engingakusho nje ukuxhuma ku-intanethi, futhi ungakwazi ukubuka ama-movie, amavidiyo, funda izincwadi ngezilimi zakwamanye amazwe, ukuxhumana nabantu abavela emagumbini kude kakhulu zomhlaba.
Nokho, polyglots - futhi abantu abavamile, hhayi anamandla. polyglots Iningi kukhona kahle ulimi, kodwa lokho akusho ukuthi umazi kahle ngokwanele, futhi ukukwazi ukufunda ngezilimi eziningi, bengakhulumi khuluma kahle.
Kusukela ezikhathini zasendulo, ulwazi ngezinye izilimi ayebhekwa isici esasenza kwabantu abafundile cultured. Iningi owaziwa emlandweni siyazi izilimi eziningana.
I sokwazi izilimi yokuqala eyaziwayo kwaba Mithridates Eupator, umbusi embusweni ePhontu. Abaphila Besikhathi Wathi bekazi izilimi 22. Yena sisizwa uphathe ibutho nezikhonzi zakhe, owafika abavela ezizweni ezihlukahlukene.
Queen waseGibhithe Cleopatra is hhayi kuphela ngenxa yobuhle balo nokuhlala inoveli, kodwa futhi njengoba owesifazane ohlakaniphile futhi abafundile, usomaqhinga brilliant eyiqaphuqaphu ezaziwayo. Yena ephethwe izilimi eziyishumi.
Isikhonzi iVatican Library Dzhuzeppe Metstsofanti lapho befunda futhi bekhuluma ngezilimi ezingu-60, no-50 babo ngabhala nenkondlo. Ngokwemibiko ethile, lapho ephethwe izilimi ezingu-80.
Kato Lomb - umbhali Hungarian, owaba omunye otolika lokuqala emhlabeni. Kuyathakazelisa ukuthi kuyi-esikoleni, wathenjiswa okusalele emuva umfundi. Wabe yingcweti izilimi 16 bebodwa, ngisho wabhala incwadi mayelana indlela yakhe siqu yokufunda izilimi. Isenzakalo esidume kunazo zonke atholwe njengoba sokwazi izilimi eziningi. IsiNgisi, isi-Hungarian, isiRashiya, isiFulentshi, isiJalimane, Chinese - lokhu kuyinto uhlu ongaphelele impumelelo yakhe.
Abantu abaningi phakathi namakhulu eminyaka ababefaka isihloko uyaziqhenya a sokwazi izilimi eziningi. Yini ekhethekile ngale laba bantu? Kungenzeka nawe ungaba omunye wabo.
ukuba abe polyglot kanjani
Kukhona umbono ukuthi sidinga ithalenta ekhethekile yokufunda izilimi. Nokho ngokwabo polyglots bathi ikhono ezakha ingxenyana encane impumelelo okungenzeka.
Ingabe ikhona izimfanelo ezikhethekile emimoya a sokwazi izilimi? Kuyini ukuphikelela kanye nogqozi bayazi kahle hle kangcono kunabantu abaningi. Into enzima kakhulu ukufundisa ulimi lokuqala angaphandle esikhathini esizayo uyonikwa lula futhi ngokushesha. izilimi eziningana elula ukufunda of neqembu elilodwa, ezifana isiNgisi, isiJalimane, iSipanishi futhi Italian.
Meyi 9 - Victory Day. Holiday Umlando Amasiko